Turkiga oo War kulul kasoo saaray injineerada lagu qarxiyay duleedka Muqdisho - Awdinle Online
Turkiga oo War kulul kasoo saaray injineerada lagu qarxiyay duleedka Muqdisho
Dowladda Turkiga ayaa faah faahin guud ka bixisay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee shaqaalaha turkiga ee dhismaha ka wada wadada u dhaxeysa Muqdisho & Afgooye kasoo gaaray qaraxa lala beegsaday.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa oo ismiidaamin ahaa lagula beegsaday Injineradooda wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye.
Bayaanka Wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen Afar Qof oo uu kujiro Sarkaal Turkish ah, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen Afar qof oo kale oo turki ah.
Sidoo kale Dowladda turkiga ayaa sheegtay inay cambareeyneyso falkaasi qaraxa ahaa ee lagu weeraray Injineeradooda u Shaqeynayay Shacabka Soomaaliyeed, iyaga oo sheegay inay dadaalkooda sii wadi doonaan.
Si kastaba Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxaasi lala beegsaday injineerada Turkiga, iyada oo weli aysan la hadlin dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleAxmed Madoobe oo sheegay in hub ay laheyd dowladda ay Shabaab kusoo weerareen
Next articleWarmurtiyeed xasaasi ah oo laga soo saaray shirka Garoowe